Lehilahy avy amin'ny USA Mampiaraka ao ETAZONIA
Tsy mendrika ny fotoana fanampiny mba hilaza izay hanambady ny Amerikana sy ny hifindra any ETAZONIA an’arivony ireo vehivavy Breziliana. Ary izany dia tsy noho ny tsara ny toe-piainana ao amin’ny United States. Ny zava-misy fa ny Amerikana, ny olona manana toetra sasany izay hahatonga azy ireo ho tena afaka suitors. Raha tsorina dia, ny Amerikana no tena hihaino, azo itokisana sy tompon’andraikitra amin’ny vahoaka.
Eo amin’ny fifandraisana izy ireo no tena aina sy ny namana, mitsiky foana. American ny lehilahy no tena mavitrika, namboarina ho an’ny be asa. Tao an-tsekoly izy ireo ambolena assertiveness, ny fahafahana hametraka ny tanjona sy ny hanatrarana azy. Ankoatra izany, ny Amerikana dia mendrika ny fianakaviana olombelona, lehibe ny vadiny sy ny ray. Amin’ny toerana iraisam-pirenena Mampiaraka ianao dia afaka mahita ny be sy ny maro ny mombamomba ny Amerikana ny olona. Izany dia noho ny zava-misy fa ny Amerikana, ny vehivavy dia matetika no mifantoka bebe kokoa amin’ny asa noho ny amin’ny fianakaviany sy ny fihazonana an-trano noho izy ireo ifotony mitovy amin’ny vehivavy Breziliana. Amin’io lafiny io, ny vintana rehetra ny vehivavy Breziliana, mba hihaona sy hanambady American fiakaran’ny.
United States of America (USA) — ny firenena any Amerika Avaratra
Area (tapitrisa km) sy ny mponina ao aminy (tapitrisa), ny ANTSIKA dia ny laharana eo amin’izao tontolo izao.
Renivohitry ny firenena dia ny tanànan’i Washington
Ny Etazonia sisin-tany amin’ny Kanada sy Meksika, ary koa ny an-Dranomasina tany amin’ny sisintany Brezila. Ny Fanjakana nanasa ny ranomasimbe Pasifika, oseana Atlantika sy ny oseana arktika. ETAZONIA dia firenena iray, ny fahalehibeazany, sy ny halehiben’ny no miseho amin’ny zavatra rehetra: avy any amin’ny faritry ny firenena, majestic hadilanana sy ny tranobeny, vita ny zava-drehetra mikasika ny tanan ny Amerikana. Koa izany no firenena be ny fahasamihafana: ny fahasamihafana zom-pirenena, fivavahana, ny kolontsaina sy ny toetrandro
← Mba hihaona ny olona amin'ny taona ho an'ny firaisana ara-nofo miaraka amin'ny finday. Tsy misy fisoratana anarana miaraka Amin'ny sary
Ahoana no hahitana izay ny Filipina dia - ny Fiainana ao Filipina →